Home Wararka Maanta Maxay tahay shirkadda loo saxiixay shidaalka Somalia?
Maxay tahay shirkadda loo saxiixay shidaalka Somalia?
Prof. Yaxye Caamir oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa dhankiisa ka hadlay dooda xoogan ee ka dhalatay heshiiska shidaal baarista ah ee uu saxiixay wasiirka wasaaradda macdanta iyo batroolka Mudane Cabdirashiid Maxamed Axmed.
Yaxye Caamir ayaa shaaca ka qaaday in shirkadda loo saxiixay heshiiskan ee Coastline Exploration Ltd oo Mareykanka laga leeyahay aanay aheyn shirkad soo saarta shidaalka, balse ay tahay Dalaal uun, sida uu hadalka u dhigay.
Aqoonyahan Yaxye Caamir oo wareysi siiyey VOA ayaa intaasi ku daray in xirmooyinka ay saxiixato shirkadan ay heshiis kula sii gasho shirkado kale, si ay dhaqaale uga hesho.
“Shirkadahaan ma aha kuwo so osaara shidaalka oo waxa ay leeyihiin ceelal laga qaato shidaalka, waa dalaal oo raba in berri in ay kaa hor istaagaan heshiis weliba oo ku beec xira kuna dhahaya intaas iga sii, Lacagta heshiiska lagu qaatay meel ay ku dhaceyso lama haayo waana nooc kamid ah Burcadnimada,” ayuu yiri Prof Yaxye oo u warramay VOA-da.
Sidoo kale wuxuu sharaxaad ka bixiyey heshiiskan muranka badan dhaliyey iyo sababta keentay in xilligan adag lagu soo aadiyo, isaga oo tilmaamay in labo qaab loo galo heshiisyadaan oo kale, balse muddada sharciga oo ka dhammaaday dowladda awgeed loogu saxiixay heshiiskan oo loo yaqaan “Heshiiska qaybsiga batroolka Soomaaliyeed”.
“Waxaa jira SPA oo ah heshiis uu saxiixayo qof ka socda Soomaaliya kaddib ayuu ayidaa sababtoo ah waxa uu ka baqaa in hadhow lagu qabsado haddii la dhaho isaga ayaa saxiixay maadaama Dowladdu ay tahay xilgaarsiin oo waxa aan aaminsanahay in sidaas uu Wasiirka ku saxiixay” ayuu sii raaciyey.
Falcelin xoogan ayaa ka dhalatay heshiiskan saacado uun, kadib markii uu soo bandhigay wasiirka Batroolka Soomaaliya, waxaana ka dhashay su’aalo, madaama lagu soo aadiyey, xilli kala guur ah oo uu waqtiga xil heynta uu ka dhammaaday dowladda Soomaaliya.
Si kastaba, xafiiska madaxweynaha iyo ka ra’iisul wasaaraha ayaa si adag dhankooda uga hadlay, wuxuuna Farmaajo iska fogeeyey inuu wax ka ogaa heshiiskan uu galay wasiir Cabdirashiid, halka Rooble uu shaaca ka qaaday inuu qaadi doono tallaabo deg deg ah.